Hoos u dhac markii ugu horeysay laga dareemay Mogadishu qiimaha sarifka dollarka – Banaadir weyne
Hoos u dhac markii ugu horeysay laga dareemay Mogadishu qiimaha sarifka dollarka
10-ka Febraayo 2017
Muqdisho – Magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka qaarkood ayaa Qiimaha lagu sarifo lacagta dollarka Maraykanka ee loo bedelayo Shilin Soomaaliga waxaa laga dareemay hoos u dhacii ugu horeeyey ee uu ku yimaada muddo sanado ah.
Boqolka dollar oo dhowrkii sano ee u dambeeyey la kala siisanayey labo milyan saddex boqol iyo konton Shso ayaa 24kii saac ee la soo dhaafay hoos uga dhacay, waxaana uu hadda u dhexeeya milyan iyo sagaal boqol illaa labo milyan Shso.
Qiime dhaca dollarka iyo sare u kaca shilin Soomaaliga ayaa saameeyey qiimaha raashinka daruuriga ah iyo badeacadaha kale ee iyana waxoogaa raqiisay.
Qaar ka mid ah sariflayaasha ka shaqeysta suuqyada magaalada Muqdisho ayaa sheegay in sababaha hoos u dhaca ku keenay qiimaha dolarka Maraykanka ay tahay ka dib markii uu suuqa soo galay dollar fara badan oo loo adeegsaday ololihii doorashada Madaxweynaha ee maalmo ka hor lagu kala baxay taasoo ay sheegeen iney keentay in Shilinka Soomaaliga uu ciriiri galo, dolarkana uu qiime dhac ku yimaado.
Sidoo kale, sariflayaasha ayaa ku macneeyey sababaha hoos u dhaca qiimaha dollarka iney qeyb ka tahay doorashada madaxweynaha cusub ee Somalia Maxamed C/llaahi Farmaajo oo balan-qaaday marka uu xilka la wareego inuu mushahar deg deg ah siin doona ciidamada iyo shaqaalaha dowlada.
Hoos u dhaca ku yimid qiimaha sarifka dollarka ayaa waxaa walaac ka muujiyey qoysaska biilasha dibeda looga soo diro iyo shaqaalaha mushaharkooda ku qaata lacagta dolarka kuwaasoo ka cabanaya in dollarkiina uu hoos u dhacay, qiimihii maciishadana aysan wax badan isbedelin taasoo ay sheegeen iney ku tahay khasaare.
Qiime dhaca ku yimid sarifka dollarka suuqyada Muqdisho iyo gobolada dalka qaarkood ayaa ku soo beegmaya xili labo maalin ka hor Soomaliya loo doortay madaxweyne cusub oo xilka heyn doona afarta sano ee soo socota, kaasoo bedelaya madaxweynaha xilka ka sii degaya. – Somali Wayn
Madaxweynaha Lubnaan: Sucuudigu ha caddeeyo sababta Xariiri u soo noqon waayey
Guddiga Doorashooyinka oo Hor istaagey Bulshada Rayidka
Banaanbaxo Ka Bilowday Degmada Warshiikh
Xubin ka mid ahaa Guddiga Qaran ee Taakuleynta Ciidamada oo is casilay
Golaha Wasiirada Galmudug oo kulan deg deg ku yeeshay Magaalada Cadaado
Waare “Inta aan Baarlamaanka la horgeyn Hindise sharciyeedyada aan ka wada tashano”
Liiskii Labaad Oo Maanta Laga Soo Saaray Magaalada Cadaado
Guddoomiyeyaasha Labada Aqal Ee Baarlamaanka Oo Gaaray Garowe
Q.M oo Ka Warbixisay Xuquuqda Aadanaha Soomaaliya